OKRSO's family: 10 March 2013
(အီးမေးလ်ကနေ လက်ခံရရှိသည့် ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။) ကိုးဒီသွေးမှတဆင့်ပြန်လည်ကူးယူတင်ပြသည်။
အဖွဲ့ အစည်းတခုမှာ ````အဖွဲ့ ရဲ့ နာမည်က အဓိကလား၊ အဖွဲ့ ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က အဓိကလား````
ဒီအကြောင်းကို ရေးဖို့ က အတော်ကြာပါပြီး ….အဖွဲ့ အစည်းထိခိုက်သွားမှာရယ် ကိုယ့်လူမျိုးကိုထိခိုက်သွားမှာရယ် စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိနေလို့ မရေးဖြစ်ဘဲ…မှိန်းနေခဲ့တယ်။အခုတော့ မရေးရင်လဲ မဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားမှာ ရောက်နေလို့ ရေးရတော့မယ်။
တနေ့ fb မှာ ၀င်လည်ရင်း အကြောင်းအရာတခုကို တွေ့ လိုက်မိတာကြောင့် ကာလအတော်ကြာ ဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ သံသယစိတ်တခု ပိုပြီးပိုပြီး ကြီးမားလာသလို ဒီအကြောင်းအရာဟာ ကျနော်ရဲ့ဒီသံသယစိတ်ကို အတည်ပြုပေးလိုက်သလို ရင်ထဲမှာခံစားရပါတယ်၊ ကျနော့်ရဲ့ သံသယစိတ်နဲ့ အတူ အဖွဲ့ အစည်းအပေါ် အမျိုးသားအပေါ် ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်တွေကို မှတ်စုအနေနဲ့ ရေးထားချင်တာရယ် ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်တွေကို အခြားလူတွေဆီ ဝေငှချင်တာရယကြောင့် ဒီစာစုကို ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fb မှာ ဘာအကြောင်းအရာလဲ…..
အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ မဆက်သွယ်ဖြစ်တာ…လအတော်ကြာပြီး။ တလောတုန်းကတော့ ဗဟိုကော်မီတီအသစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲ ပြန်လုပ်တယ်လို့ ကြားလိုက်မိတယ်။ တဆက်တည်းမှာဘဲ အဲဒီဗဟိုကော်မီတီအသစ်ချက်ချွတ်ခေါင်းဆောင်တွေက အဖွဲ့ အစည်းဟာ နာမည်ပြောင်းသင့်ရင် ပြောင်းရမယ် လို့ လေသံပါ ဆက်ကြားလိုက်ရတော့ ကျနော်အလွန်တုန်လှုပ်အံသြမိသလို စိတ်လဲအလွန်ပျက်မိသွားပါတယ်။
အဖွဲ့ အစည်းထဲကို ၀င်လာတဲ့လူတွေကရော ဘာရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ဝင်လာကြတာလဲ။ထိုင်တောင်မထိုင်ရသေးဘူး ခြေထောက်အရင်ဆန့် နေတယ်ဆို ဒါမျိုးဆိုလိုတာဖြစ်မယ်။ အဖွဲ့ အစည်းတခုထဲကိုဝင်တယ်၊ အလုပ်တခုလုပ်တယ်ဆိုတာက ငှင်းအဖွဲ့ အစည်းနဲ့ ပါတ်သက်တာ ငှင်းအလုပ်နဲ့ ပါတ်သက်တာတွေ စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိဖို့ လိုအပ်တယ်။ ခံစားတတ်ဖို့ ၊ မြင်တတ်ဖို့ လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
အဖွဲ့ အစည်းခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာပြီး အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ဦးစီးဦးဆောင်ပြီး လုပ်ဆောင်ရမယ့်အစား အဖွဲ့ အစည်းနာမည်ကို ပြောင်းဖို့ အရင်ခြေလှမ်း လှမ်းလာတယ်ဆိုတော့ ဒါဟာ ရိုးသားမှုရှိရဲ့ လား၊ ဒီယုန်မြင်လို့ ဒီခြုံထွင်တာလားလို့ မေးခွန်းထုတ်ရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။အဖွဲ့ အစည်းကို ဗျိုင်းအင်န်ဂျီအိုမျက်လုံးနဲ့ အချောင်သမားတွေ ကြည့်နေပြီလားဆိုတာ သတိထားမိလာတယ်။
ဒါပေမဲ့ အချိန်အတိုင်းအထာတခုထိ စောင့်ကြည့်မယ်စိတ်ကူးပြီး ဆက်ငြိမ်နေလိုက်တယ်။
အခုတော့ fb မှာ တွေ့ လိုက်ရတဲ့ ကရင့်နှစ်သစ်ကူးဖိတ်စာကြောင့် ဒီစာစုကိုရေးဖြစ်သွားတာပါ။
ပထမတော့ ဘန်ကောက်နဲ့ အနီးနားတ၀ိုက်မှာရှိတဲ့ ဒေသခံတွေက ပွဲတြေ်ာ်တွေ တနိုင်တပိုင်ကျင်းပနေကျမို့ ဒီဖိတ်စာလည်း အဲဒီဒေသခံတွေကျင်းပတဲ့ ဖိတ်စာကို ဥက္ကဌက fb ကနေတဆင့် အကျိုးဆောင်ဖိတ်ကြားပေးတယ်လို့ ဘဲထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျင်းပမဲ့နေရာကို သေချာကြည့်လိုက်မိတော့ ဒါဟာတခုခုလွှဲနေပြီးလို့ ရင်ထဲမှာ ကောက်ချက်ချလိုက်မိတယ်။
ဒီနေရာဟာ အဖွဲ့ စည်းအနေနဲ့ အသုံးပြုခွင့်ရတာလဲ ဆယ်စုနှစ်တစုကျော်နေပြီး။ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်တွေကအစပေါ့။ ဒီနေရာကို သုံးခွင့်ရဖို့ ဘယ်လိုထိုးဖေါက်လာခဲ့ရသလဲ...သူများက ကိုယ့်အဖွဲ့ အစည်း ကိုယ့်ပြည်သူတွေကို ယုံကြည်လက်ခံလာအောင် ဘယ်လောက်ထိ ကြိုးစားရသလဲ တွေးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီတော့ အလွဲသုံးစားမလုပ်လိုက်မိပါနဲ့ ။ အဖွဲ့ အစည်းအနေနဲ့ အရင်တုန်းက ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်တွေ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနိုင်ဖို့အခြားကြီးမားတဲ့အဆောက်အအုံတွေ နေရာတွေအသုံးပြုခွင့်ရခဲ့တယ်.။ အဲဒီနေရာတွေ ဆက်လက်သုံးခွင့်မရတော့တဲ့နောက်ပိုင်း ဒီနေရာကိုဘဲ အားထားနေရတယ်။
ဒီနေရာဟာ ကိုယ်တို့ အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ နောက်ဆုံးခြေကုပ်စခန်းလို့ ဆိုရင်လဲမမှားဘူးပေါ့။ ဒီခြေကုပ်စခန်းပျောက်ရင် အဖွဲ့ အစည်းလည်း ပျောက်ဖို့ ကိန်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေရာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်။
အဖွဲ့ အစည်းဟာ ဘယ်လိုအဖွဲ့ အစည်းမျိုးလဲ….
အနှစ်20-ကျော်ကြာ ရပ်တည်လာတဲ့အဖွဲ့ အစည်းတခု၊ အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဖြစ်တဲ့ လူမှုကယ်ဆယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အမျိုးသားရေးတွေအပြင် ကရင့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်တွေကို အခြေအနေပေးရင်ပေးသလို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
ပွဲတော်တွေကျင်းပတဲ့အခါတိုင်းမှာ လည်း အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့လူတွေ၊ ကိုယ့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို တန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေ၊ လူမှုရေးစိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့လူတွေ ၊ ပရဟိတစိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့လူတွေ ငှင်းတို့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကနေ လာရောက်ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတယ်။ OKRSO အဖွဲ့ ဝင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ ကရင်လူမျိုးဟုတ်မှလည်း မဟုတ်ပါ။
လာရောက်ဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့တယ်။ ပွဲတော်ကို အတူတကွ ချစ်ခင်ရင်းနီးစွာနဲ့ ပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့ကြတယ်။ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်နဲ့ ပါတ်သက်ရင် OKRSO အဖွဲ့ ရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေ တက်ညီလက်ညီနဲ့ စုစည်းညီညွတ်မှုရှိကြပါတယ်။
OKRSO အဖွဲ့ ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို နှစ်သက်အားကျလို့ အချို့ သူတွေဆိုရင် OKRSO အဖွဲ့ ဝင်မဟုတ်သည့်တိုင် သူတို့ ကိုယ်သူတို့OKRSO အဖွဲ့ သားလို့ ဘဲ ခံယူသတ်မှတ်ကြပါတယ်။
ပွဲတော်ကျင်းပတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဒေသခံတွေက ချက်ပြုတ်ရေးမှာ ၀ိုင်းလုပ်မယ်၊ ဘယ်ရွာသားတွေက ဘာတာဝန်ကိုယူမယ်၊ ဘယ်တိုင်းရင်းသားတွေက ဘယ်ဌာနမှာ ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်မယ်၊ ကားရှိတဲ့ သူတွေက အကြိုအပို့ ကိစ္စတွေမှာ ၀ိုင်းကူမယ်ဆိုပြီး စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ လာရောက်လက်တွဲခဲ့ကြပါတယ်။ OKRSO အရင်ခေတ်က မမှီလိုက်ရတဲ့သူတွေ လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတွေမှာ ပြန်လိုက်ရှာကြည့်လို့ ရပါတယ်။
အခုတော့ ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲကို ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ OKRSO အဖွဲ့ နာမည်ကို မတပ်ရဲတော့လောက်အောင် ဘာအကြောင်းအရာတွေက အဟန့် အတားဖြစ်စေတာလဲ၊ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အဖွဲ့ အစည်းစိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့သူ၊ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့သူတွေကို စိတ်ဓါတ်ရိုက်ချိုးလိုက်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူက အတွေးအခေါ်လျှံသွားတာလား အတွေးအခေါ်ကျန်သွားတာလား။ဒီအဖွဲ့ အစည်းကို ၀င်လုပ်တာ ကိုယ်စိတ်နိုင်မှ၊ အဖွဲ့ အစည်းစိတ်ဓါတ်ရှိမှ ၀င်လုပ်ပါ။ ဒီအဖွဲ့ အစည်းကို လေးစားမှုရှိမှ ၀င်လုပ်ပါ။အဖွဲ့ အစည်းတခုမှာ ထိပ်ပိုင်းတာဝန်ယူသူများအနေနဲ့ဟိုအဖွဲ့ မှာလဲပါ၊ ဒီအဖွဲ့ မှာလဲပါတဲ့အဖြစ်တွေလည်း မဖြစ်သင့်ပါ။
ကိုယ့်အဖွဲ့ အစည်းကို ဦးစားပေးရမယ်ဆိုတဲ့အသိလဲ ခေါင်းထဲမှာ ထည့်ထားရပါမယ်။
ကရင့်နှစ်သစ်ကူးနေ့ ဟာ ကရင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ နှစ်သစ်ကူးနေ့ ဆိုတာ အားလုံးလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေရာဒေသအရ ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့အဖွဲ့ အစည်းနာမည်ကို တပ်တာလဲ ဘာမှမှားယွင်းမှုမရှိပါဘူး၊
အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ နှစ် 20 မှာ တောက်လျှောက် ဒီအတိုင်းဘဲလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်တဦးတယောက်မှ ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းမှ ကန့် ကွက်တာလဲမတွေ့ တဲ့အပြင်၊ အဖွဲ့ အစည်းအနေနဲ့ ဒီလိုဦးစီးဦးဆောင် လုပ်ပေးနိုင်တာကို လူအများ ၀မ်းသာကျေနပ်အားရကြပါတယ်။ OKRSO အဖွဲ့ အစည်း ပွဲတော်ကျင်းပတာကို ကျနော်/ကျမတို့ မသွားဘူး ပြောတဲ့သူရှိရင် ကိုယ်ဘာမှ ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး။ အဲဒါ ဆိတ်ဂွေးစိအတွေးအခေါ်ဘဲ။
အဖွဲ့ အစည်းရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း အဖွဲ့ အစည်းနာမည်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ လေသံနဲ့ ယခု ပွဲတော်ကျင်းပတာ ကိုယ့်အဖွဲ့ အစည်း ဦးဆောင်ကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့ နာမည်မထည့်တာ ………..မဟုတ်မှလွဲရော အဖွဲ့ အစည်းနာမည်ပြောင်းဖို့ ခြေလှမ်းအစလား….
ကျနော့်ရဲ့ သံသယစိတ်ဟာ အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်း အဖွဲ့ အစည်းမှာ သံသယဖြစ်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေပါတယ်။ အဖွဲ့ အစည်းဟာ အဖွဲ့ အစည်းတခုနဲ့ မတူတော့လောက်အောင် ဦးတည်ချက်တွေ၊ အင်္ဂါရပ်တွေ၊ လမ်းကြောင်းတွေ အလွှဲကြီးလွှဲနေပါတယ်။
အမျိုးသားရေးဝါဒီ အဖွဲ့ အစည်းဝါဒီသမားတွေကတဖက် အလိုတော်ရိတွေနဲ့အဖွဲ့ အစည်းကိုလာပြီး ကူညီသယောင်နဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်ချင်တဲ့သူတို့ ကတဖက် အားပြိုင်နေကြတယ်။အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ရမဲ့အလုပ်တွေကို မလုပ်ဘဲ၊ အုပ်စုဖွဲ့ ပြီးတော့ အချင်းချင်း ချောက်ထဲတွန်းချကြတယ်။ကိုယ့်အဖွဲ့ သားတွေကြားမှာ တို့ မီးရှို့ မီးလုပ်တဲ့သူလဲရှိတယ်။ ကိုယ့်အဖွဲ့ အစည်း ၊ ကိုယ့်လူမျိုးကို ရောင်းကုန်တခုလိုဘဘောထားပြီး ရောင်းစားဖို့ ကြံစည်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။
ဇာတ်ပွဲနောက်လိုက်ဘူးတဲ့သူကလဲတမှု..... အဖွဲ့ အစည်းမှာရောက်လာပြီး ငှင်းရဲ့ ဇာတ်ပွဲနောက်လိုက်တုန်းက ရှိထားတဲ့အကျင့်လို့ ပြောရမလား ဒီအဖွဲ့ အစည်းကိုရောက်လာတော့လည်း သောက်ရှက်မရှိ အဖွဲ့ အစည်းမှာ ဇာတ်ကလေးလာထောင်နေတယ်။
အဖွဲ့ အစည်းမှာ ရောက်လာတဲ့သူတွေကို အဖွဲ့ ဝင်ကဒ်မလုပ်ဘဲ ဇာတ်ကလေးအဖွဲ့ ဝင်ကဒ်တွေလုပ်တယ်၊ရယူမှုတွေယူ ၊ အဖွဲ့ အစည်းအရိပ်ကိုခို ၊ နောက်တော့ အဖွဲ့ အစည်းကို ခြေစုံကန်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ သိက္ခာအတော်ရှိတဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ထင်နေတာလား။ဒါပေမဲ့ သူ့ ကိုယ်သူတော့အဟုတ်ကြီး ထင်နေတဲ့ပုံဘဲ။ အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ ကယ်တင်ရှင်လိုလို လေသံတွေ ပစ်လိုက်သေးတယ်။
အမုန်းခံပြီးသူ့ ကို ပြောမဲ့သူကလဲမရှိ(အမှန်တော့ အခြားလူတွေက သူနဲ့ မာအေံသာကဲအေး) အမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်ကြီးစတိုင်လို ကိုင်နေတယ်။ နိုင်ငံခြားကလူတွေက အဖွဲ့ အစည်းပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ကရင့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းစာအုပ်ကို ပိုးကရင်လို ဘာသာပြန်ဖို့ ဘတ်ငွေ သောင်းပေါင်းများစွာပို့ ပေးတယ်။
သူက အဲဒီယုံကြည်မှုကို အလွှဲသုံးစားလုပ်ပြီး ငွေတွေကိုလည်း အလွှဲသုံးစားလုပ်လိုက်တယ်။ ငွေလဲအကုန်ပျောက် အလုပ်လဲဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ နိုင်ငံခြားကလူတွေ ကိုယ့်ကို တိုင်ပြောတာတွေရှိတယ်။
ဖွဲ့ အစည်းကို ကာပြီး အဆင်ပြေသလို ပြန်ပြောပြရတာပေါ့။ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ အဖွဲ့ အစည်းကလူတွေရော ဘာသာပြန်ဖို့ ငွေပို့ ပေးတဲ့သူရော သောက်ဂရုမစိုက်တဲ့လုပ်ရပ်ဘဲ။ ယုံကြည်မှုနဲ့ သူများအပ်တဲ့အလုပ်ကို ကိုယ်တာဝန်မယူနိုင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်ယူသုံးထားတဲ့ငွေတွေကို သိက္ခာရှိရှိ ပြန်လျော်ပေးဖို့ ဘဲရှိတယ်။
လူသူတွေရှေ့ မှာတော့ သူတော်ကောင်းလုပ်ပြီး တရားဟောနေတယ်။
OKRSO အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ သူ့ ရဲ့ ဇာတ်ကလေးအဖွဲ့ ကို ပုံမှားရိုက်ပြီး လုပ်စားနေတယ်။ ရိုက်စားနေတယ်။ ဇာတ်ကလေးအဖွဲ့ ထောင်တော့…သူ့ ဇာတ်ကလေးအဖွဲ့ မှ တကယ့်အဖွဲ့ အစည်းကြီးလိုမှတ်နေတယ်။
ဘာဖွဲ့ စည်းပုံမှလည်းမရှိ၊ကိုယ့်ကိုယ်ကို တကယ်ဟုတ်မှတ်နေတယ်။ နွားခြေရာက ရေအိုင်ကို ပင်လယ်ကြီးလို့ ထင်နေတဲ့ ဖါးကလေးလို့ ဥပမာပေးရမလား၊ OKRSO မှာ ပညာလာသင်၊ လာအိပ်လာစား၊ ဇာတ်ကလေးအဖွဲ့ လာထောင်ယူသွားတောင်မှ သူနဲ့ သူ့ ဇာတ်ကလေးအဖွဲ့ သူ/သားတွေဟာ OKRSO အဖွဲ့ ကို ဖုတ်လေတဲ့ငါးပိ ရှိလို့ မှန်းတောင် ထင်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။တော်တော်ကျေးဇူးတရားသိတတ်တဲ့သူတွေဘဲ။ OKRSO မှာတော့ ရုံးက အိမ်သာပြည့်သွားတာဘဲ အဖတ်တင် ကျန်ရစ်နေပါတယ်။ကိုယ်တဦးတယောက် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိုဖို့ အတွက် ဒီလောက်ထိ ချနင်းမသွားသင့်ဘူးလို့ ထင်တယ်.။
ထပ်ပြောပါမယ်…ကိုယ့်အဖွဲ့ အစည်း ၊ကိုယ့်အမျိုးသားဟာ ရောင်းကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။ အဖွဲ့ အစည်းကို ကူညီတဲ့သူ၊ အလှူရှင်တွေကလဲ စေတနာသန့် သန့်နဲ့ ကူညီပါ၊လှူပါ။ ကူညီတာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စေတနာရဲ့ နောက်မှာ ဓါး မပါစေနဲ့ ။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိကူညီပါ။
သင်တန်းတွေအတွက် အကူငွေဟာ ဘယ်သူတွေက၊ ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းက ဘယ်လောက်ပေးမှန်းလဲမသိ၊ တဆင့်ခံအကူငွေရှာပေးတဲ့သူက အဖွဲ့ အစည်းကိုအမျိုးမျိုးချယ်လှယ် ၊ ဖွင့်လှစ်တဲ့သင်တန်းအစီရင်ခံစာကို စိတ်ကြိုက်တင်ခိုင်း၊ ဟုတ်လား မဟုတ်လားတော့မသိ၊ သူသြဇာခံတဲ့လူကို မစို့ မပို့ လေး ထောက်ပံ့ ၊ ဟိုကလဲကျေနပ်၊။ သူ့ သြဇာမခံတဲ့သူကို နှမချင်းကိုယ်ချင်းမစာဘဲ ဂုဏ်သိက္ခာကင်းမဲ့စွာ ရုပ်မာရိုင်းစိုင်းတဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေသုံးပြီး ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းတယ်။ အလွန်ရွံစရာကောင်းတဲ့ အပြုအမူဘဲ။
အဖွဲ့ နာမည်ပြောင်းဖို့ ဘယ်ကစလဲ…
အဖွဲ့ အစည်းနာမည်ပြောင်းဖို့လေသံကြားလာတာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အလှူငွေရှာပေးတဲ့သူနဲ့ ယခင်အဖွဲ့ အစည်းမှာ တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူ တဖက်နဲ့ တဖက် သဘောထားတင်းမာတဲ့ကိစ္စကလို့ပြန်ကောက်ချက်ချရမယ်။
အလှူရှင်အမည်ခံတဲ့သူက အဖွဲ့ အစည်းကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ချင်တယ်၊ အပိုင်သိမ်းချင်တယ်၊ အဖွဲ့ အစည်းကိစ္စတွေပါ ၀င်ရောက်ချယ်လှယ်ချင်တော့ အဖွဲ့ အစည်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက မခံနိုင်လို့ ….ခင်ဗျားရဲ့ အကူငွေကို မယူတော့ဘူး ကိုယ့်အဖွဲ့ အစည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်ပါတ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။
အလှူရှင်အမည်ခံတဲ့သူနဲ့အဖွဲ့ အစည်း အလိုတော်ရိတွေနဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေလုပ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ လက်ရှိသင်တန်းဖွင့်နေတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းရုံးနေရာကို မသုံးတော့ဘဲ အခြားနေရာကို ငှားပြီးသင်တန်းဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ နေရာအသစ်ရှာဖို့ အဆင်မပြေတာဘဲလား၊ မတတ်နိုင်တာဘဲလား၊ အဖွဲ့ အစည်းကို ခြေစုံကန်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်တာဘဲလား၊ တကယ့်အလှူရှင်နဲ့ အကြောင်းပြဖို့ မခိုင်လုံတာဘဲလား ၊ငှင်းတို့ ရဲ့ အကြံအစည် အကောင်အထည်မပေါ်လာဘူး။
နောက်ဆုံးတော့ အဖွဲ့ အစည်းကို ရောင်းစားချင်တဲ့အလိုတော်ရိတွေက အဖွဲ့ အစည်းမှာ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ မသိရှိရဘဲ အလှူရှင်အမည်ခံ ဆိုတဲ့ လူထံမှာ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်ပြီး ထောက်ပံကြေးတွေထပ်ယူပြီး သင်တန်းပြန်ဖွင့်ပြန်တယ်။
ဒါဟာ အဖွဲ့ အစည်းတခုရဲ့ သောက်တလွှဲလုပ်ဆောင်ချက်ဘဲ။ အလိုတော်ရိတွေအတွက်တော့ မစို့ မပို့ လေး ရချင်ရမယ်။ ဒါက ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်တွေဘဲသိမယ်။
ဒီ့နောက်မှာတော့ အလိုတော်ရိတွေနဲ့ အလှူငွေရှာပေးတဲ့သူတွေ အချင်းချင်း ကွဲကြပြဲကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလဲ ထပ်ကြားရတယ်။ အဝေမတည့်ကြတာဘဲလား အချင်းချင်း သီးမခံနိုင်ကြတော့တာဘဲလား မပြောတတ်ဘူး။ဒါလဲ ကါယကံရှင် ကိုယ်တိုင်တွေဘဲသိကြမယ်။
တကယ်တော့ အလှူငွေရှာပေးတဲ့လူဟာ အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ ပျော့ကွက်ကို ကိုင်ထားတာကြာနေပြီး။လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ကျော် ၀န်းကျင်ခန့် ကပါ။ ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူက မျက်နှာလွှဲခဲပစ်လုပ်သွားတယ်။ အလှူငွေရှာပေးသူနဲ့ ရုံးမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတယောက်နဲ့ သင်တန်းတွေကို ဖွင့်လှစ်ရင်း သင်တန်းငွေကြေးတွေကို သူတို့ ဘာသာ သူတို့ သုံး၊ သူတို့ ဘာသာသူတို့ အစီရင်ခံစာတင်ပါတယ်။
အဖွဲ့ အစည်းက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ဒီကိစ္စကို သိဖို့ လဲမကြိုးစားဘူးဆိုတော့ အလှူငွေရှာပေးသူရဲ့ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီလိုမောင့်သဘော စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ ရသွားတယ်ဆိုတော့ အရသာသိသွားတာပေါ့၊
နောက်ရွေးကောက်ပွဲတက်လာတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက ဒီကိစ္စကို လမ်းကြောင်းမှန်ရောက်အောင် ပြန်ကိုင်တွယ်ဖို့ ကြိုးစားတော့ အရသသိသွားတဲ့(ယူ့ ယာ.နွဲသးဖါ်)အလှူရှင်ရှာပေးတဲ့သူက အမျက်ဒေါသတွေ ထတော့တယ်။ အမှန်တော့ ဒီလိုမျိုးလုပ်ရပ်ဟာ ဥပဒေအရရော လူသားဝါဒအရရော အလွန်စည်းကျော်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ အစည်းတဖွဲ့ အနေနဲ့ လည်း အလွန်ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလိုတောရိတွေက သူ့ ဘက်ပါနေတော့ သူရည်နေတာပေါ့။
အဖွဲ့ အစည်းနာမည်ပြောင်းဖို့ လုပ်ဆောင်တာ အခုမှပထမအကြိမ်လား?…………..
တကယ်တော့ အဖွဲ့ အစည်းနာမည်ပြောင်းဖို့ လုပ်ဆောင်မှုဟာ အခုတကြိမ်ဟာ ပထမအကြိမ်မဟုတ်သလို နောက်ဆုံးအကြိမ်လည်း ဟုတ်မယ်မထင်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က အဖွဲ့ အစည်းနာမည်ပြောင်းဖို့ တခါဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ လူအရ…ယခင်ကအဖွဲ့ အစည်းမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ ထွက်သွားတယ်ဆိုပါစို့ ။
သုံးနှစ်ကျော် လေးနှစ်အတွင်း အဖွဲ့ အစည်းမှာ ပြန်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။ အမြင်မှန်တွေရပြီး ပြန်လာဝိုင်းလုပ်မယ်အထင်နဲ့ အဖွဲ့ သူ/သားတွေက သူ့ ကို ၀မ်းသာအားရနဲ့ လက်ကမ်းကြိုဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တိုအတွင်း ရုပ်လုံးပေါ်လာတော့တယ်။
အဖွဲ့ အစည်းမှာ ၀င်လုပ်ရင်း အခြားအဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ အင်န်ဂျီအိုတွေနဲ့ ဆက်ဆံခွင့် သိကျွမ်းခင်မင်မှုရယူခဲ့တယ်.။ အဲဒီအခွင့်အရေးကို သူအသုံးချပြီး လူတဦးတယောက်(သို့ )အင်န်ဂျီအို တခုခုက သူကို သွေးထိုးမြှောက်ပေးတာဘဲလား၊ သူ့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဗီဇ၊စရိုက်ကြောင့်ဘဲလား ၊ မျိုးစေ့ဘဲမမှန်တာဘဲလား အဖွဲ့ အစည်းဟာ ထောက်ပံကြေးများများရဖို့အဖွဲ့ နာမည်ပြောင်းမယ်လို့ စမွှေပါတော့တယ်။
အဖွဲ့ အစည်းကို လစဉ်ထောက်ပံ့ငွေအနည်းငယ်ပေးတဲ့ အင်န်ဂျီအိုအဖွဲ့ နဲ့ သူနဲ့ လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီး အဖွဲ့ အစည်းနာမည်ပြောင်းဖို့ ဖိအားတွေ ပေးပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ အမာခံတွေက သူ့ ရဲ့ ဂြိုလ်မွှေမှုကို အံတုတောက်ခံထားနိုင်လို့အဖွဲ့ အစည်းဟာ မူလနာမည်အတိုင်း မူလလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမွှေသလို အဖွဲ့ အစည်းနာမည်ပြောင်းဖို့ ဖြစ်မလာတော့ အဖွဲ့ အစည်းကနေ သူထွက်ပြီး သီးသန့် တံစဉ်ထောင်သွားလိုက်ပါတယ်။
သူထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဘဲ အဖွဲ့ အစည်းကို နှစ်ပေါင်း 20 နီးပါး ကူညီထောက်ပံခဲ့တဲ့ အင်န်ဂျီအိုတဖွဲ့ က အဖွဲ့ အစည်းကို ထောက်ပံကြေး ဖြတ်တောက်သွားလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ မွှေသွားလဲဆိုတာ ……အဖွဲ့ အစည်းကို ကျေးဇူးဆပ်တယ်လို့ ဘဲ မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ အဖွဲ့ ဝင်တွေ ယခင်ကထက် ပိုပြီးစုစည်းတာ အရှုံးထဲက အမြတ်ဘဲလို့ မှတ်ယူတယ်။
အဖွဲ့ အစည်းဟာ နာမည်ပြောင်းဖို့ လိုအပ်ပြီလား…
OKRSO အဖွဲ့ ဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ OKRSO အဖွဲ့ အစည်းအပေါ် ခံယူတဲ့သူ အတိမ်အနက်နဲ့ သာ သက်ဆိုင်မယ်။ အဖွဲ့ အစည်းစတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့တဲ့လူတွေ လုပ်စရာကိုင်စရာမရှိလို့ အားအားယားယားနဲ့ ဒီအဖွဲ့ အစည်းကို ဖွဲ့ စည်းလာတာမဟုတ်ဘူး။ (အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း ဖတ်ဖူးတဲ့သူဆိုရင် ပြောစရာမလိုတော့ဘူး)။
အဖွဲ့ အစည်းတဖွဲ့နှစ်ပေါင်း20-ကျော်ရပ်တည်နိုင်အောင် အခက်အခဲတွေများစွာထဲက တာဝန်သိတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ ဘယ်လောက်ထိ ပုခုံးပြောင်းတာဝန်ယူရသလဲ၊၊ တကယ်လို့ သာ ဒီအဖွဲ့ အစည်းဟာ မွန်မြတ်မှုမရှိဘူး လူအများက၊ ပြည်သူအများက လက်မခံဘူးဆိုရင် ဒီလောက်ထိ သက်တမ်းရှည်နိုင်မလား။
အဖွဲ့ အစည်းမှာ စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ ပေးဆပ်တဲ့လူတွေလည်းများစွာရှိသလို အချို့ ဆိုရင် အဖွဲ့ အစည်းဟာ ဘာမှန်းတောင် မသိရလိုက်ဘဲ အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် ဒုက္ခကနေ လွတ်မြောက်သွားကြတယ်၊
အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် နိုင်ငံခြားကိုရောက်သွားပြီး ကောင်းစားသွားကြတယ်။ အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် အခြေခံပညာအနည်းငယ်ကအစ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ပညာသင်ခွင့်ရသွားကြတယ်။
အလှူရှင် အင်န်ဂျီအိုတွေအကြိုက် အဖွဲ့ အစည်းကို နာမည်ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားချင်သူတွေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အင်န်ဂျီအိုတွေ၊ ငှင်းအင်န်ဂျီအိုတွေနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့မြန်မာအဖွဲ့ အစည်းအကြောင်းတွေ ရေးထားတဲ့ စာတမ်းတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေအကြောင်း အရင်ရှာဖတ်ပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သားတွေအတွက် အင်န်ဂျီအိုတွေ၊ အလှူရှင်တွေအကြိုက် လူုနှစ်ယောက်နဲ့ တပိုင်းကို အဖွဲ့ သုံးဖွဲ့ ထောင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကအစ မြန်မာပြည် နာဂစ်မုန်တိုင်းနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အင်ဂျီအိုတွေအကြောင်းတွေ နှံ့ နှံ့စပ်စပ်လိုက်ဖတ်ပါ။ ခေါင်းဖြူအင်န်ဂျီအိုတွေ၊ ခေါင်းမဲအင်ဂျီအိုတွေ ပုပ်နံ့ တွေအကြောင်း နေရာအနှံ့တွေ့ ရမှာပါ။
ယုတ်စွအဆုံး အင်န်ဂျီအိုဝန်ထမ်းတွေ လူမှုရေးဖေါက်ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေ၊ အကူညီလိုအပ်တဲ့သူတွေထံမှာ တကယ့်ဌာနချုပ်က ချပေးတဲ့ငွေ 20-ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာ ရတဲ့အကြောင်းတွေလဲ ကြားသိရမှာပါ။
ဒီလိုပြောခြင်းအားဖြင့် အင်န်ဂျီအိုတွေအကုန်လုံးကို ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းသမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့၊ စေတနာသန့် တဲ့ အင်န်ဂျီအိုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေ၊ ဖွံ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ အင်န်ဂျီအိုတွေနဲ့ကင်းတဲ့ နိုင်ငံ၊ ကင်းတဲ့အရပ်ဒေသ ဆိုတာ မရှိသလောက်ဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အမျိုးသားနဲ့ ကိုယ့်အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ ပါတ်သက်လာတဲ့ အင်ဂျီအိုတွေဆိုရင်တော့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ စေတနာသန့် တဲ့ အင်န်ဂျီအိုအဖွဲ့ တွေဖြစ်ဖို့ သတိထားရပါမယ်။
လက်ရှိကိုယ့်အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အင်ဂျီအိုအမည်ခံကို သုံးသပ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အဖွဲ့ နာမည်အကြောင်းဆက်သွားရအောင်..........အဖွဲ့ အစည်းမှာ လမ်းကြုံလို့ ဝင်လုပ်တဲ့သူရှိသလို ၊ စိတ်ဓါတ်အားထက်သန်လို့ ဝင်လုပ်ကိုင်တဲ့လူတွေလဲရှိတယ်။ သက်တမ်း 20 ကျော်အတွင်းမှာ ပြည်တွင်းပြည်ပက အဖွဲ့ ဝင်ဟောင်းတွေ ဒေသအနှံ့ ရှိပါတယ်။
လက်ရှိတာဝန်ယူတဲ့သူတွေ အဖွဲ့ နာမည်ပြောင်းချင်တယ်ထားအုံး အခုသက်တမ်းမှာတာဝန်ယူတဲ့သူ ဗဟိုကော်မီတီတွေအားလုံး အဖွဲ့ နာမည်ပြောင်းဖို့ အားလုံး သဘောတူရင်တောင်မှ ပြောင်းချင်တိုင်းပြောင်းလို့ မရပါဘူး။
ဒီ့ထက်ခပ်ရှင်းရှင်းလေးပြောရရင် ဒီအဖွဲ့ ဒီနာမည်မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အစကတည်းကမ၀င်လာရုံဘဲ၊ မျက်စိလည် လမ်းမှားလို့ ဝင်ရောက်လာပြီးဆိုတော့လဲ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်ထွက်သွားလိုက်ရုံပါဘဲ။
အင်န်ဂျီအိုတွေရဲ့ အကြိုက်အဖွဲ့ နာမည်ပြောင်းချင်ရင် လက်ရှိ ရှိထားတဲ့အဖွဲ့ အစည်းကို ခုတုံးလုပ်စရာမလိုဘဲ၊တက်နင်းစရာမလိုဘဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သီးသန့် အဖွဲ့ ထောင်ယူလိုက်ရုံပါဘဲ။ ပြည်သူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိ လက်ခံတယ်ဆိုတာ အဲဒီအချိန်ကျမှ အဖြေပေါ်လာမယ်။
အဖွဲ့ အစည်းအခြေစိုက်ရာဒေသမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို စေတနာသန့် သန့် နဲ့ အမှန်တကယ်ကူညီချင်တဲ့ အင်န်ဂျီအိုတွေဆိုရင် သီးသန့် အဖွဲ့ ထပ်ဖွဲ့ စရာမလိုဘဲ ကိုယ့်အဖွဲ့ အစည်းအောက်မှာ ဌာနခွဲဖွင့်ပြီး အလုပ် လုပ်ကိုင်စေလို့ ရတာဘဲ။စီမံခန့် ခွဲတတ်ဖို့ ဘဲလိုတယ်။
ဒီတော့ အဖွဲ့ နာမည်ပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးရှိတဲ့သူတွေ၊ လုပ်ဆောင်မဲ့လူတွေ အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ အတိမ်အနက်ကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် အရင်လေ့လာစေချင်တယ်။
အဖွဲ့ နာမည်ပြောင်းဖို့ အရင်တယောက် ကြိုးစားတဲ့သူက သီးသန့် အဖွဲ့ အစည်းထောင်သွားပြီး အဖွဲ့ အစည်းကို ကျေးစွပ်လိုက်တယ်။ နောက်တယောက်က အဖွဲ့ အစည်းမှာ ဇာတ်ကလေးလာထောင်သွားပြီး အဖွဲ့ အစည်းကို ခြေစုံကန်လိုက်တယ်။ အခုဖြစ်တဲ့လုပ်ရပ်က အဖွဲ့ ဝင်က ဇာတ်ကလေးထောင်တာမဟုတ်တော့ဘဲ။ ဇာတ်အုပ်တွေကိုယ်တိုင်က ဇာတ်ခေါင်းကိုဖြုတ်ခွဲပြီး ဇာတ်ကလေး(သို့ )အခြားဇာတ်အဖွဲ့ သစ်ထောင်မယ်လို့ ပြောရမလားဘဲ။
ရှိထားတဲ့အဖွဲ့ အစည်းတောင် အဖွဲ့ အစည်းတဖွဲ့ နဲ့ တူအောင် မလုပ်နိုင်သေးဘူး၊ အင်န်ဂျီအိုရဲ့ အကြိုက် အဖွဲ့ နာမည်ပြောင်းဖို့ (သို့ )အဖွဲ့ သစ်ထောင်ဖို့ လုပ်နေတယ်။ ကျနော်/ကျမတို့ က ပညာရေးတခုဘဲနားလည်တယ် ဆိုတဲ့ လေသံလည်းကြားရတယ်။ ပညာရေးကို နားလည်တယ်၊ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကိုတော့ အားပေးတယ်။အဖွဲ့ အစည်းမှာ ပညာရေးတခုဘဲ နားလည်ပြီး အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ``ဘူး``ခံလို့ လဲ မရပါဘူး။
အထူးသဖြင့် ခေါင်းတောင်နေရာယူတဲ့သူတွေ သတိရှိရမယ်။ အဲဒီပညာရေးဟာ အဖွဲ့ အစည်းအကြောင်း၊အမျိုးသားရေး၊ လူမှုရေး တွေကိုတောင် နားမလည်တာ ဘာပညာရေးလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်စရာ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ။
ပြီးတော့…ပြီးခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းမှာ ဇာတ်ကလေးထောင်သွားတဲ့ ကိစ္စကို ပြန်သုံးသပ်စေချင်တယ်။ အဖွဲ့ အစည်းမှာ ပညာလာသင်တဲ့လူတွေ အဖွဲ့ အစည်းဟာ ဘာမှန်းလဲမသိလိုက်ရဘူး။
အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ ခံစားချက်၊ အမျိုးသားရေးခံစားချက်လည်းမရှိဘူး၊ လိုချင်တာရသွားပြီး အဖွဲ့ အစည်းကို ကျောခိုင်းသွားကြတယ်။ အမှန်တော့အဖွဲ့ အစည်းမှာ ပညာလာသင်တဲ့ခလေးတွေ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ လာရောက်ပါဝင်ပါတ်သက်တဲ့လူတွေကို အနည်းဆုံးတော့ အဖွဲ့ အစည်းစိတ်ဓါတ်၊ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်တွေကို ရိုက်သွင်းနိုင်ရမယ်။
အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို(အင်္ဂလိပ်လို နာမည်အတိုခေါက်၊ အရှည်ခေါက်ကို မြန်မာလို၊ ကရင်လို ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းကို ဆိုလိုတာမဟုတ်) ဖွင့်ပြ၊ ရှင်းပြနိုင်ရမယ်။ ဖွင့်ပြနိုင်ဖို့ ရှင်းပြနိုင်ဖို့ လဲ ကိုယ့်မှာ အခံရှိဖို့ လိုတယ်။
ဒါမှသာ အဖွဲ့ အစည်းဟာ ရေရှည်အမျိုးသားအကျိုး၊ ပြည်သူအကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။ အဖွဲ့ အစည်းလဲ အင်အားတောက်တင်းလာမယ်။ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တော့ရင်လဲ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကို စိတ်ချလက်ချနဲ့ ပုခုံးပြောင်းတာဝန်လွဲအပ်လို့ ရတာပေါ့။
ဒီစာစုဟာ ကျနော့်ရဲ့ သံသယစိတ်ကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စာစုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ရဲ့ သံသယစိတ်တွေ ပျောက်ပျက်သွားအောင် ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် အချိန်ယူရမှာဖြစ်သလို သံသယစိတ်ရှိခံထားရတဲ့သူတွေဘက်ကလဲ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြဖို့ လိုပါကြောင်း။
ဒီစာစုကို ကြိုက်သလို ရှဲလို့ ရတယ်၊ ကြိုက်သလို ပြန်ဆွေးနွေးလို့ ရပါတယ်။
OKRSO မှ ကရင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆရာဖြစ်သင်တန်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေး
မတ်လ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း (ကေအိုင်စီ)
့ပြည်ပရောက် ကရင်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့-OKRSO မှ ဦးဆောင်ပြီး ကရင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆရာဖြစ်သင်တန်းကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ယမန်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ တွင် အခမ်းအနားတရပ်ကျင်းပကာ စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့သည်။
ယင်းဆရာဖြစ်သင်တန်းကို ဘန်ကောက်မြို့ရှိ OKRSO Every Sunday School (Scared Heart Convent School)ခေါင်တိန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် ယမန်နေ့ (မတ်လ ၁၀ရက်နေ့) နံနက် ၁၀နာရီခွဲမှ နေ့လည် ၁၂နာရီ အထိ အခမ်းအနားပြုလုပ်ကာ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား ၅၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်၍ OKRSO ၏ ကရင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ရေးကော်မတီမှ ဥက္ကဌဖြစ်သူ စောစိပ်ပလောင်က “အခုပြည်ပမှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ ကရင်လူငယ်မောင်မယ်တွေ အနေနဲ့ ပြည်ပ ယဉ်ကျေးမှုတွေ လွှမ်းမိုး မခံရအောင်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု တွေကို သိမြင်ပြီး ထိန်းသိမ်းတတ်အောင် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ပရောက် ကရင်လူမျိုးများ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို သိရှိမြတ်နိုးတတ်ရန် နှင့် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်ဟု စောစိပ်ပလောင်က ပြောသည်။
ယခုသင်တန်းသည် မေလ ၅ အထိ နှစ်လကြာ မြင့်မည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းတွင် အခြေခံကရင်စာပေ၊ ကရင်ရိုးရာ ဒုံးအက၊ ကဗျာရေးဖွဲ့သီကုံးမှု၊ ကရင်စောင်းကောက် သင်ကြားမှု၊ အခမ်းအနား အစီအစဉ် တင်ဆက်မှု၊ လေ့လာ မှတ်သားစရာ ကရင့်သမိုင်းစာမျက်နှာနှင့် အထွေထွေ ဗဟုသုတ ဆိုင်ရာ စသည်တို့ကို သင်ကြားပေးမည်ဟု သိရသည်။
လက်ရှိ သင်တန်းတွင် ကရင် ဆရာ၊ ဆရာမ ၈ ဦးမှ အရှေ့ပိုးကရင်စာပေကို အဓိကထားကာ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းအားလုံးအတွက် ကျောင်းသူကျောင်းသားစုစုပေါင်း ၂၈ ယောက် လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းထားသည်ဟု စာစိပ်ပလောင်က ဆိုသည်။
ထို့အပြင် စကောကရင် စာပေလည်း ဆက်လက်သင်ကြားပေးရန် အစီအစဉ်ရှိပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးပါက ထိုင်း နိုင်ငံအပြင် လိုအပ်ပါက မြန်မာပြည်တွင်းသို့လည်း ဆရာဆရာမများကို စေလွှတ်သင်ကြားပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
OKRSO ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဘန်ကောက်မြို့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ကရင်လူမျိုးများ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို အစဉ်တစိုက် ဖော်ထုတ်မြှင့်တင်လာခဲ့ရာမှ ကရင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆရာဖြစ်သင်တန်းကို ယခု ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုယ့်ကရင်စာပေယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ကြစို့ 
ပထမဆုံးအကြိမ် ကရင်စာပေ ဆရာဖြစ်သင်တန်းအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ခြင်း
OKRSO မှ ဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်သော ပထမဆုံးအကြိမ် ကရင်စာပေဆရာဖြစ်သင်တန်းကို ဘန်ကောက်မြို့ ရှိ OKRSO Every Sunday School (Sacred Heart Convent Shool)ခေါင်တိန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် မတ်လ (၁၀)ရက်နေ့၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။
ဤကရင်စာပေသင်တန်းမှပို့ ချသောခေါင်းစဉ်များမှာ…အခြေခံကရင်စာပေသင်တန်း၊ကရင့်ရိုးရာဒုံးအကသင်တန်း၊လ်ုဝါ်(ခ)ကဗျာရေးဖွဲ့ သီကုံးမှုသင်တန်း၊ကရင့်စောင်းကောက်သင်ကြားမှုသင်တန်း၊အခမ်းအနားအစီအစဉ်တင်ဆက်မှုသင်တန်း၊လေ့လာမှတ်သားစရာကရင့်သမိုင်းစာမျက်နှာသင်တန်းနှင့်အထွေထွေသင်တန်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။သင်တန်းနေ့ ရက်ကို(၁၀.၃.၂၀၁၃)မှ (၅.၅.၂၀၁၃) အထိသင်တန်းဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။
OKRSO မှ ကရင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆရာဖြစ်သင်...
ပထမဆုံးအကြိမ် ကရင်စာပေ ဆရာဖြစ်သင်တန်းအောင်မြင်စွာဖ...